Saxaraha ku yaal koonfur-bari Kaliforniya ayaa noolaanaya ka dib shan sano oo abaar ah | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Anza Borrego Gobolka lamadegaanka
Xitaa lamadegaanka ugu liita ayaa ku siin kara yaabka ugu yaabka badan. Waana taas, duufaanka ka dib, xasilloonida marwalba way soo noqotaa ama, halkii, nolosha. Tusaale ahaan tan waa lamadegaanka koonfur-bari California. Halkaas, ka dib shan sano oo abaar ah, roobabkii jiilaalkan ee la soo dhaafay ayaa ka dhigay ubaxyada inay la wareegaan dhulka.
Laakiin sidoo kale waa inay ku sameeyeen qaab cajiib ah. Caadi ahaan, had iyo jeer waxaa jira warshad lagu dhiirrigeliyo inay ubaxdo xitaa haddii xaaladaha aysan aad u fiicnayn; Si kastaba ha noqotee, markan kumanaan iyo kumanaan ubax ah ayaa dhalaalaya lamadegaanka gobolka koonfur-bari.
Sawir - Kyle magnuson
Abuurka ku yaal lamadegaanka kulul wuxuu u baahan yahay kuleyl, carro aad u bacaad badan, iyo biyo yar si uu u soo baxo. Si kastaba ha noqotee, meelahan marna ma ogaan kartid goorta roob da'o oo ku filan dhirta inay dib u soo baxaan. Laakiin noolaha dhirta ayaa soo saaray qiyaas la-qabsi oo la yaab leh: mar haddii ubaxyada la wasakheeyey, embriyaha ayaa suuxsan kara muddo dheer, maadaama qolofka ilaaliya uu badanaa aad u adag yahay.
Dabcan, sida ugu dhakhsaha badan dhibcaha ugu horreeya ayaa dhacaya, iniinaha ayaan ka waaban inay biqlaan si ay uga dhigaan kuwa ugu badan dareeraha qaaliga ah ee ka caawin doona inay dhammaystiraan meertadooda nololeed, taas oo ah wixii ka dhacay California.
Roobab ka soo baxay lamadegaanka Anza Borrego, oo ku yaal koonfur-bari California, laga soo bilaabo 1985 illaa 2017. Sawir - NOAA
Roobku wuu yaraa xilliyadan dambe, laakiin xilliga qaboobaha 2016/2017 dhacay in ka badan laba jibbaar wixii dhacayay. Sida aad ku arki karto sawirka kore, saxaraha Anza Borrego celcelis ahaan roobab qabow waa 36ml, laakiin kii ugu dambeeyay ayaa jabiyay diiwaanka waqtiyadii ugu dambeeyay sidaasna ku dhammaaday, ugu yaraan daqiiqad, abaarta.
Sawiradu runti waa qurux badan yihiin, saw umalayn mayso?
Sawirka - Anza Borrego Hagaha Ubaxyada Facebook
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » SAWIRRO: Saxaraha Koonfur-bari Kalifoorniya ayaa soo noolaanaya ka dib shan sano oo abaar ah